‘सेबोन पूँजीबजार ध्वस्त पार्न उद्यत, एलिटका कारण सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा !’
काठमाण्डौ । नेपाली सेयर बजार र आम लगानीकर्ताहरुको साइनो गज्जबको छ । गज्जब यस अर्थमा कि सेयर बजारमा नेप्से इण्डेक्स उकालो लागेर ऐतिहासिकतातर्फ लम्किरहेका बेला सेयर बजारमा बिछट्टै आकर्षण जाहेर गर्दै बजार प्रवेश गर्नेको तछाडमछाड नै देखिन्छ । यस्तै भीडलाई समाउँदै सेयर बजारको साँढे समाउन सकिने उच्च अभिलाषाका साथमा प्रवेश गर्न विभिन्न...
-अनुपमा खुञ्जेली (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-मेगा बैंक लिमीटेड पछिल्लोकालमा वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धिको दौडले अर्थतन्त्रमै हलचल ल्याइदियो । यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? -हाम्रो देशमा द्वन्द्वकालमा पनि बैंकिङ क्षेत्रले राम्रै गरेको हो । त्यसको अर्थ विजिनेश ग्रोथ निरन्तर छ र राम्रो छ भन्ने हो । अहिले त स्थायी सरकार आइसकेको छ ।...
‘केही बैंकरले धेरै खरानी घसे, आफू पनि डूबे अरुलाई पनि डूबाए !’
-राजनसिंह भण्डारी(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)-सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमीटेड फेरि पनि बैंकहरुबीच ब्याजदर वृद्धिको दौड सुरु भएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? -सिम्पल छ, कर्जाको डिमाण्ड बढी भयो । त्यहीअनुसारको निक्षेप आउन सकेन । निक्षेप किन आउन सकेन ? -अहिले मुलुक राजनीतिक स्थायीत्वमा हिँडेपछि जसलाई पनि व्यापार व्यवसाय गर्नुछ, गरिरहेका...
-अम्बिकाप्रसाद पौडेल(अध्यक्ष)-नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम पूँजीबजारको इस्यू देशको हट इस्यू भइरहेको छ । मुद्रा तथा पूँजी बजारको समस्या अध्ययन गर्न भन्दै अर्थमन्त्रीबाट गठित उच्चस्तरीय समितिमा तपाईको पनि सहभागिता छ । पूँजीबजार र सेयर लगानीकर्ताको समस्याका बिषयमा तपाई त्यो समितिमा कसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ ? -मैले नेपालको पूँजीबजारको...
-ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना(अध्यक्ष)-नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबिए) बैंकरहरुबीच ब्याजदरको बिषयमा लामो समयसम्म कायम भद्र सहमति भंग भएरै छाड्यो । यस पछाडिका कारण के–के हुन् ? -देशको अर्थतन्त्रले ब्याजदरको अत्यधिक चाप थेग्न सक्दैन भनेर हिजोको दिनमा हामीले भद्र सहमति कायम गरेकै हौ । कर्जा महङ्गो भयो भने उत्पादन लागत बढ्छ, यसले मुलुकलाई...
‘ब्याजदरको लिगलिगे दौड राम्रो भएन, फेरि भद्र सहमति गरौं’
-अजयकुमार मिश्र(डेपुटी सीइओ)-जनता बैंक नेपाल लिमीटेड देशका बैंकहरुबीच ब्याजदर वृद्धिको लिगलिगे दौड फेरि सुरु भएको छ । बैंकिङ उद्योगमा के हुन खोज्दैछ ? -यसले समग्र उद्योगलाई राम्रो गर्दैन, यो वास्तविकता हो । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्दैन । यहाँ समस्याहरु धेरै छन्, ब्याजदर एउटा कारक तत्व मात्र हो । हामीले बैंकहरुको...
-प्रा.डा. मनोहरकृष्ण श्रेष्ठ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजोआज ? २०६७ सालमा त्रि.वि.बाट सन्यास लिइसकेपछि अहिले फ्रीलान्सरको रुपमा बढी व्यस्त छु । योसँगै सेयर लगानीकर्ता अनि नेपाली पूँजी बजारको शुभचिन्तकका रुपमा समेत व्यस्त छु । निकट भविष्यमा आउन लागेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको बिषयमा तपाईको धारणा के हो ? यो प्रणाली सेयर...
‘विज्ञापन व्यवसायीमा उर्जा भर्न कृति अवार्ड’
►रविन्द्रकुमार रिजाल ‘शशी’–अध्यक्ष नेपाल विज्ञापन संघ(आन) यसपटकको कृति अवार्ड कहिले र कसरी वितरण हुँदैछ ? -यो पटक कृति अवार्डको १० औं संस्करण आयोजना गर्न लागेका छौ । यो कार्यक्रम २०७५ साल भाद्र ७ गते सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजना हुनेछ । तपाईहरुले विगत लामो समयदेखि अवार्ड वितरण गर्दै आउनुभएको छ, यसको उद्देश्य चाहि के हो ? -कृति...
राजनसिंह भण्डारी-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल) सरकारले ल्याएको बजेटप्रति यहाँको धारणा के हो ? -हाम्रो अर्थमन्त्री ज्यूले अर्थतन्त्र बुझ्नुभएको छैन भन्दा कसैले पत्याउँदैन, मैले यसो भनेँ भने बरु मलाई सबैले बेवकुफ भन्लान् । तर, अब अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री भन्दा पर गएर राजनीतिज्ञ भइसक्नु भएको छ । राजनीतिज्ञले बनाएको...
राजश्व सचिवको अन्तर्वार्ता, भन्छन्-'निर्णय फिर्ता असंभव, बजार खुलाउने कोशिश भइरहेको छ'
-शिशिरकुमार ढुंगाना-राजश्व सचिव सेयरमा लाभकरको विवाद के हो ? -राइट र बोनस सेयरको कस्ट प्राइसको कुरा उठेको छ, त्यो बारेमा धेरै साथीहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ, बजार यही कारणले बन्द पनि भयो । यसको वास्तविकता के हो त भन्ने बिषय अध्ययन गर्न आज हामीले समाधानका लागि राजश्व विभागबाट उठेको बिषय र लगानीकर्ताबाट उठेको बिषयलाई समेत दृष्टिगत गरी...
‘बैंकहरु उग्र भए, नसम्हालिए आफैंलाई दुःख !’
►गणेशराज पोखरल(डेपुटी सीइओ)-सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल बैंक तथा बित्तीय संस्था लगानी बिस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याई प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने अवस्था नै सिर्जना भएको देखिन्छ । यो सकसपूर्ण अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? -अहिले नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा २१ सय अर्बभन्दा...